मेसी बार्सिलोनाका लागि वरदान साबित ! - Everest Dainik - News from Nepal
मेसी बार्सिलोनाका लागि वरदान साबित !
एजेन्सी । सामान्यतः एउटै टिमबाट खेलिरहेका फुटबल खेलाडी आफ्नै टोलीका अर्का राम्रो खेलाडीको प्रशंसा गर्न हिचकिचाउँछन् । अझ मैदानमा पास दिनुपर्ने बलसमेत नदिएर स्वार्थी भएको धेरै उदाहरण देख्न पाइन्छ । तर, बार्सिलोनाका स्ट्राइकर लुइस स्वारेजले आफ्ना समकक्षी लियोनल मेसीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् ।
स्वारेजले मेसी टोलीको लागि वरदान साबित भएको भन्दै बार्सिलोनालाई अबको च्याम्पियन्स लिग जिताउने अभिभारा मेसीकै काँधमा रहेको बताएका छन् ।
प्रतिद्वन्द्वी रियल म्याड्रिड लगातार तीन पटक युरोपियन च्याम्पियन बनेपछि केही निरास देखिएको बार्सिलोनाले अहिले च्याम्पियन्स लिग जित्ने दाबी गरिरहेको छ । स्वारेजले बार्सिलोनाले यो उपाधि जितेमा आफूभन्दा मेसीका लागि खुसी हुने धारणा व्यक्त गरे ।
ट्याग्स: Luis suarez and Messi